ဆန်ခေါက်ဆွဲပြား ၅ ကျပ်သား
ပုစွန်စိပ် ၃ ကျပ်သားခန့် 
ငါးအသားပြား ၁ ပြား
ငရုပ်သီးအနှစ် ၁ စွန်း
ကြက်သွန်ဖြူ ( နုတ်နုတ်စဉ်းပြီး ) ၁ စွန်း
ပဲငံပြာရည်အငံ ၀.၅ လ္ဘက်စွန်း
ပဲငံပြာရည်အချို ၀.၅ လ္ဘက်စွန်း
ခရုဆီ ၁ စွန်း
ကြက်သားမှုန့််ဝ.၅ လ္ဘက်စွန်း
ပြောင်းဖူးဆီ ၃ စွန်း
ကြက်ပြုတ်ရည် ၅၀ မီလီလီတာ
၁ ။ ပုစွန်စိပ် ကို သန့် စင်ပြီး ငါးအသားပြား နှင့် ကိုက်လန်ရွက် တို့ ကို ပါးပါးလှီးထားပါ။
၂ ။ ဆန်ခေါက်ဆွဲပြား ကို ကြက်သွန်ဖြူ ၊ ပဲငံပြာရည်အချို တို့ နှင့် ပြောင်းဖူးဆီ တွင် ၁ မိနစ် ခန့် ကြော်ထားပါ။
၃ ။ ပုစွန်စိပ် နှင့် ငါးအသားပြား ကို ကြက်သွန်ဖြူ ၊ ငရုပ်သီးအနှစ် ၊ ပဲငံပြာရည်အငံ ၊ ပဲငံပြာရည်အချို ၊ ခရုဆီ တို့ နှင့် ၁ မိနစ်ခန့်ကြော်ပေးပြီး ကြက်ပြုတ်ရည် ကိုထည့်ကြော်ပေးပါ။
၄ ။ ပုစွန်စိပ် ကျက်လျှင် အသင့်ပြင်ဆင်ထားသော ကိုက်လန်ရွက် နှင့် ဆန်ခေါက်ဆွဲပြား ထည့်ကြော်ပေးပြီး ကြက်သားမှုန့် ၊ ငရုပ်ကောင်းမှုန့် တို့ နှင့် အရသာထိမ်းညှိပေးရျွ် ပဲပင်ပေါက် ၊ နှမ်းဆီမွှေး တို့ အုပ်ပြီး တည်ခင်းပါ။
Flat Rice Noodle 80 g
Shrimps 50 g
Fish Cake 1 number
Samba Chili Paste 1 tbsp
Kai-Lan Leavealittle
Light Soya Sauce ½ tsp
Dark Soya Sauce ½ tsp
Chicken Seasoning Powder ½ tsp
Bean Sproutalittle
Clean the Shrimp and sliced the Fish Cake, Kai-Lan Leaves and put aside.
Sauté the Flat Rice Noodle with Chopped Garlic, Dark Soya Sauce in some Corn Oil for 1 minute and put aside.
Sauté the Shrimp and sliced Fish Cake with Chopped Garlic, Samba Chili Paste, Light Soya Sauce, Dark Soya Sauce, Oyster Sauce for 1 minute and add some Chicken Stock.
When Shrimp get tender put Kai-Lan and sauté Flat Rice Noodle and mix well then seasoning with Chicken Seasoning Powder, Crushed Black Pepper and finishing with some Bean Sprout and Sesame Oil to serve.